အဆိုပါဗာတီကန်စီးတီးလာရောက်လည်ပတ်စေရန်စတားဆွဲဆောင်မှုများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား > အဆိုပါဗာတီကန်စီးတီးလာရောက်လည်ပတ်စေရန်စတားဆွဲဆောင်မှုများ
သငျသညျဥရောပတှငျနထေိုငျခဲ့လျှင် သငျတို့သတဲ့ရရှိပါသည် တနင်္ဂနွေ နှမြောဖို့ (ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုလုံးကို ရက်သတ္တပတ်!), ပွောဆို “ဟုတ်ကဲ့” ရထားလမ်းမှတဆင့်ဗာတီကန်စီးတီးလာရောက်လည်ပတ်ဖို့နဲ့မှာပျော်မွေ့ အပြည့်အဝမြန်နှုန်း!
မှစ. 1929 ဗာတီကန်လွတ်လပ်သောပြည်နယ်နှင့်ကမ္ဘာ့အသေးငယ်ဆုံးတယောကျခဲ့. နေဆဲ, ကြောင်းယင်း၏ဘုန်းအသရေလျော့ဘယ်တော့မှ, လှပမှု, နှင့်၎င်း၏လွန်စွာယဉ်ကျေးမှုဖှယျနှင့် သမိုင်း အဓိပ်ပာယျ. ပဲကျော် spanning ပေမယ့် 0.44 စတုရန်းကီလိုမီတာ, ဗာတီကန်ရဲ့စောင့်ရှောက်ဖို့အများကြီးဆွဲဆောင်မှုတယ် အလုပ်များခရီးသွားဧည့်: စိန့်ကနေ. အဆိုပါ Sistine Chapel မှပေတရု၏ Basilica (နှင့်အကြားမှာရှိတဲ့တခြားအရာခပ်သိမ်း), သင်ဗာတီကန်မှာရှိတဲ့သုံးစွဲတိုင်းစက္ကန့်ကိုချစ်လိမ့်မယ်.
အဖြစ်ဝေးရထားလမ်းမှတဆင့်ဗာတီကန်စီးတီးလာရောက်လည်ပတ်သွားသည်အဖြစ်, ခေတ်မီလည်းမရှိ လျှပ်စစ်ရထား အားလုံးဗာတီကန်နိူးများအတွက်ရရှိနိုင်. ရထားဗာတီကန်စီးတီးသို့ချိတ်ဆက်နေသည် မီးရထားဘူတာရုံ with the Pontifical Villas.
စိန့်. Peter’s Basilica is the most known when Visiting the Vatican
အဆိုပါခမ်းနားစိန့်. ပေတရု၏ Basilica ဗာတီကန်၏အဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်, ဘယ်မှာစိန့်ဖြစ်ထင်ဘာပျေါတှငျတညျဆောကျ. ပတေရုသသင်္ဂြိုဟ်ရာအရပျ.
စိန့်. ပေတရု၏ Basilica နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်တွေ '' အလုပ်၏ပေါင်းလဒ်လက်တွေ့ကျကျဖြစ်ပါသည်. လုံးဝကိုကွောကျရှံ့-သပိတ်မှောက်, စိန့်အတွက်အနုပညာ. ပေတရု&#၈၂၁၇;့ဘက္စ္ဆီလီကာကစတင်ခဲ့သည်ရှေ့တော်၌သင်တို့ကို ကိုရိုက်ထည့်ပါဘုရား. သငျသညျအဓိကတံခါးအထက်တွင် Giotto ရဲ့ mosaic ၏အကြွင်းအကျန်များနှင့်အတူကွန်၏ Bernini ရဲ့ရုပ်ထုကိုပထမဆုံးမြင်ရပါလိမ့်မယ်. သူတို့ဟာတို့သည်အိမ်တော်ကြေးဇူးအားဖွငျ့, နှင့် 185m ရှည်လျား 46m အရပ်ရှည်ရှည် nave တစ်ဦးအမိုးခုံးအထိမြင့်တက် 119 အထက်မီတာ! သဘာဝကျကျ, သင်သည်သင်၏မျက်စိယုံကြည်မည်မဟုတ်ကြောင်း Michelangelo ရဲ့နာမည်ကျော်Pietàလည်းရှိပါတယ်! အဆိုပါစက္ကမင်မင်္၏ကြွယ်ဝစွာအလှဆင် Chapel ကိုကြည့်ပါ, Bernini ရဲ့ခမ်းနားဘားရို့ကြေးဝါ Baldacchino, အဆိုပါပုပ်ရဟန်းမင်းသည်ယဇ်ပလ္လင်နှင့်ဤမျှလောက်ပိုပြီး.
၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ညာဘက်အတွက်အံ့မခန်း, အဆိုပါ Sistine Chapel သင်လျှင်ကြည့်ရှုရလိမ့်မယ်မရှိသေးပါအခြား site ကိုဖြစ်ပါတယ် ရထားလမ်းမှတဆင့်ဗာတီကန်စီးတီးလာရောက်လည်ပတ်ကြသည်. အတွက်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Sixtus IV ကတည်ဆောက် 1473-84 နှင့်ထံမှပွနျလညျထူထောငျ 1980 သို့ 1994, Sistine Chapel အများအပြားအနုပညာရှင်များကနံရံဆေးရေးပန်းချီကားများရရှိထားသူ. အမည်များကို Michelangelo သလား, Perugino, Pinturicchio, Botticelli, Rosselli, Ghirlandaio, နှင့် Signorelli ဘာမှကိုဆိုလိုတာ? ကောင်းစွာ, သူတို့က Sistine Chapel ၏နံရံစေ Renaissance ပန်းချီ၏အထွတ်အထိပ်ကကူညီပေးခဲ့. အဆိုပါ Chapel အတွင်းပိုင်းခြယ် Michelangelo ရဲ့နောက်ဆုံးတရားစီရင်ဥရောပအနုပညာအရှိဆုံးသိသိသာသာများနှင့်အထင်ရှားဆုံးအောင်မြင်မှုစဉ်းစားသည်.
Sistine Chapel တစ်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးရွေးချယ်တင်မြှောက်ဖို့ conclave ကျင်းပလျက်ရှိသည်သည်အဘယ်မှာရှိ. နေ့စဉ်, ရာပေါင်းများစွာ၏ ခရီးသွားဧည့် ဒါကြောင့်အရမ်းလေးစားမိပါတယ်, နှင့် - သင်သည်ထိုသူတို့အဘို့အဦးတည်းရှိနိုင်ပါသည်, လွန်း!
ရထားလမ်းအားဖြင့်ဗာတီကန်စီးတီးလာရောက်လည်ပတ် ပတ်သက်. အကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုမှာသူကလုံးဝနီးပါးအပေါငျးတို့သတွေ့မြင်ရန်သင့်အားခွင့်ပြုကြောင်း ဗာတီကန်မှာရှိတဲ့မရှိမဖြစ်မြင်ကွင်းများ.
ဗာတီကန်ပြတိုက်ကနေပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Clement XIV နှင့် Pius VI ကိုကဒီဇိုင်းတစ်ခုစနစ်တကျအစီအစဉ် Display ကို 1769 သို့ 1799. ဤ ပြခန်း သိသာထင်ရှားသောအပိုင်းပိုင်း၏ဘဏ်ဍာ-ရည်ဝအောင်ဖြစ်ကြပြီးအနည်းငယ်မီးမောင်းထိုးပြအလွန်ခက်ခဲသည်! တစ်ခုချင်းစီကိုကမ်းလှမ်းမှုမှထူးခြားသောအရာတစ်ခုခုကိုရှိပါတယ်:
sala တစ် Croce Greca ကွန်ရဲ့သမီး၏ကြွယ်ဝစွာအလှဆင်အနီရောင် porphyry sarcophagi ရရှိထားသူ, Constantia, မယ်တော်
sala Dell မူဆယ် Belvedere ကိုယ်ထည်ပြသ, အေသင်၏ Apollonius ကပထမရာစု-ဘီစီ Michelangelo-လေးစားအလုပ်
Gabinetto Dell Maschere Tivoli အတွက်ဗီလာ Adriana ထံမှပြဇာတ်မျက်နှာဖုံးများတစ်ဦးဘုနျးကွီးသော mosaic ကြမ်းပြင်ရှိပါတယ်
Cortile del Belvedere ဟာ Apollo Belvedere ရရှိထားသူ, ဗာတီကန်မှာရှိတဲ့အကျော်ကြားဆုံးရုပ်ပွားတော်များထဲမှ
Galleria Dell ရုပ်ထုအကောင်းဆုံးသောရှေးခေတ် Candelabra features – အဆိုပါ Barberini Candelabra – ထို့အပြင် Tivoli မှာဗီလာ Adriana ကနေ
Pontifical ဗီလာ Barberini
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးရဲ့ နွေရာသီနေအိမ်သို့, အဆိုပါ Pontifical Villas – Barberini ဥယျာဉ်ကတည်းကအများပြည်သူပွင့်လင်းခဲ့ မတ်လ 2014. က signposted မပြုလုပ်ဝင်ပေါက်မျိုးခက်ခဲတွေ့ပါရန်ဖြစ်ပါသည်. ဒီခမ်းနားရာအရပျ၏ဥယျာဉ်ကျော်ရှိပါတယ် 2000 အသက်အနှစ်, သုံးအဆင့်ဆင့်ကျော်ပေါက်. သူတို့ကရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဖြစ်ကြပြီးကောင်းစွာထုတ်မသတ်မှတ်, နှင့်နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုခွံထဲမှာဘောငျအမျိုးမျိုးသောပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးရဲ့ဖျံပြသ.
ရထားလမ်းမှတဆင့်ဗာတီကန်စီးတီးလာရောက်လည်ပတ်စဉ်သင်ခံစားရန်ခရီးသွား, Search your origin and pick Rome on တစ်ဦးရထား Save website to bookaရထားလက်မှတ် မိနစ်အတွင်းနဲ့သင်တို့ရှိရာသို့အလျင်အမြန်မည်ဟုမျှော်လင့်ချင်ပါတယ်ထက်သင့်ရဲ့ဗာတီကန်စိတ်လှုပ်ရှားစတင်ရန်!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/visiting-vatican-rail/- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
သငျသညျ website တစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရန်ဆက်သွယ်နိုင်သည် တစ်ဦးကရထား RSS Feed Save.
#vatican ရိုးမား ရထားခရီးသွား ခရီးသွား travelrome vaticancity